Resources | MYNFREL | Myanmar Network Organization for Free and Fair Elections (MYNFREL)
Posted By: MYNFRElon: October 26, 2021 In: News
Please Download Here Federal-Democracy-Charter-English Federal-Democracy-Charter_MM Read more
Posted By: MYNFRElon: July 08, 2021 In: News
What’s Happening in Myanmar: Update Database MYNFREL has been collecting cases of clash through news coverage in order to provide brief information about what’s happening in Myanmar now. Please do check here https://handsformyanmar.b... Read more
Posted By: MYNFRElon: July 08, 2021 In: News, Report & Statement, Training Resources
http://Media Monitoring on the 2020 Election_Final Report_MM Media Monitoring on the 2020 Election_Final Report_MM Read more
Posted By: MYNFRElon: July 08, 2021 In: News, Report & Statement
January 29, 2021 Joint Statement by Domestic Election Observer Organizations There isagrowing concern within the public that the electoral disputes over the results of the 2020 general elections and different electoral processes would cause po... Read more
အားလုံးအကျုံးဝင် ရွေးကောက်ပွဲသတင်းစဉ် ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာ (နိုဝင်ဘာလ)
Posted By: MYNFRElon: June 29, 2021 In: News, Training Resources
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၈)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းမီဒီယာဖော်ပြမှု အကြောင်းအရာများအား လေ့လာခြင်း အစီအစဉ်အတွက် နိုဝင်ဘာလ (ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ခြင်း၊ ကြိုတင်မဲပေးခြင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲနေ့အခြေအနေများအား လေ့လာ... Read more
Call for Expression of Interest – Translation Services Myanmar Network Organization for Free and Fair Elections (MYNFREL) isalocal civil society organization based in Yangon. MYNFREL invites call for expression of interest from Service Provide... Read more
MYNFREL (မြန်ဖရယ်) ၏ ၂၀၂၀ ပါတီစုံ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ လေ့လာစောင့်ကြည့်မှု အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာအား အောက်ပါလင့်တွင် Download ရယူနိုင်ပါသည်။ Election Observation 2020 General Elections Final Report Conducted by MYNFREL Please Download the Full Versio... Read more
ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွေ့ရှိချက်ကနဦးအစီရင်ခံစာ အနှစ်ချုပ်ထုတ်ပြန်ချက် နိုဝင်ဘာလ၊ (၉) ရက်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် လွတ်လပ်မျှတသောရွေးကောက်ပွဲများပံ့ပိုးကူညီရေးအဖွဲ့ (MYNFREL) အဖွဲ့မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို စောင့်ကြည့်လေ့လာရာတွင် ကချ... Read more
Posted By: MYNFRElon: November 07, 2020 In: Uncategorized
အားလုံးအကျုံးဝင်ရွေးကောက်ပွဲသတင်းစဉ် ကနဉီးအစီရင်ခံစာ (နိုဝင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်) Zawgyi အားလုံးအက်ဳံးဝင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲသတင္းစဥ္ ကနဉီးအစီရင္ခံစာ (ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္) အစီရင်ခံစာ အပြည့်အစုံအား ‌ဒေါင်းလုဒ် ရယူရန် – Download here Inclusiven... Read more